Lixdii Hadiyad Ee Ugu Qaalisanaa Ee Ay Xiddigaha Premier
By axadle Last updated May 22, 2020
Ma ahan wax qarsoon in xiddigaha Premier League gaar ahaan kuwa u ciyaara lixda kooxood ee ugu waa weyn inay lacag badan soo gasho bilowga waayahooda ciyaareed.
Inkastoo ay dhaleeceyn badan la kulmaan hadana mararka qaar waxaa laga qoraa sheekooyin ku taabana sida uu dhawaan sameeyay Brandon Williams.
Da; yarka Manchester United oo kooxda koowaad u saftay xilli ciyaareedkan islamarkaana qandaraas waqti dheer ah u saxiixay kooxda bishii Oktoobar ayaa ka farxiyay aabihiis isagoo u iibiyay todobaadkan gaari Mercedes ah isagoo ku beegay maalinta dhalashada aabihiis.
Jariirada Daily Mirror ayaa soo bandhigay lixdii hadiyad ee ugu qaalisanaa ee ay ciyaartoyda Premier League ay siiyeen waalidkood iyo xaasaskooda.
Sterling waxay si aad ah isagu dhow yihiin hooyadiis, inkastoo uusan gudi karin abaalka hooyadiis hadana waxa uu ugu mahadceliyay inuu u iibiyay guri cusub oo qiimihiisa uu gaarayo 2.5 milyan ginni.
Hooyadiis waxay ku soo korisay inay suuliga u nadiifiso dadka kale, isagoo la hadlayay The Players Tribune sannadkii 2018 waxa uu yiri: “Hamiga nolosheyda waxa uu ahaa inaan qandaraas rasmi ah saxiixo si hooyadeey iyo walaasheey aysan u dhibtoonin mar kale.”
“Maalintii aan hooyadeey u iibiyay guri, waa maalintii iigu farxada badneyd abid.”
Owen waxa uu ku dhashay Chester waxaana uu iskuul ku dhigtay Wales isagoo 750 kun ginni ku qarashgareeyay guryo isku xiga oo ay qoyskiisa degaan sannadkii 2001 si ay ugu noolaadaan meel isagu u dhow ee xuduuda England iyo Wales.
Guryaha waxa uu u iibiyay waalidkiis iyo walaalihiis.
Weeraryahanka Manchester United ayaa isna ah xiddig kale oo hooyadiis u iibiyay guri.
Weeraryahanka Ingariiska oo 18 sanno jir ahaa markii uu u soo baxay Man United iyo xulka England haatana ah 22 jir aha aay weli la nool hooyadiis isagoo wax ka bedelay nolosha hooyadiis.
Saido Mane hooyadiis iyo xubnaha kale ee qoyskiisa waxay weli ku nool yihiin Bambali oo ah tuulo ku taala dalkiisa Senegal oo ah halkii uu ku soo koray, waxa uu inta badan dhaqaale ahaan caawiyaa hooyadiis iyo bulshada uu la noolaa.
Mane waxa uu masaajid, garoomo kubada cagta ah, iskuulo iyo cusbitaalo ka dhisan magaalada uu ka soo jeedo ee dalkiisa Senegal.
David Beckham oo lacago badan ka sameeyay waqtigiisii uu kubada ciyaarayay iyo xayaysiinadii uu sameynayay ayaa hadiyado qaali ah siiyo xaaskiisa Victoria.
Waxa uu u iibiyay gawaari qaali ah oo malaayiin ginni ku kacaya laakiin hadiyadii ugu qaalisaneyd waxay aheyd dhul weyn oo ku yaala gobolka California oo uu u iibiyay xaaskiisa sannadkii 2008.
Ka hor inta uusan u wareegin Premier League, xiddiga reer Holland Fer ayaa hadiyad qaali ah u iibiyay saaxiibtiis Xenia isagoo 30 kun euro ka bixiyay faras laakiin dhibaatada jirta waxay aheyd inay deganeyd guri dabaq ah.
axadle 2087 posts
Trump warns cities, states to get “much…
RASMI: Natiijada Baadhitaankii Ugu Dambeeyey Ee Fayraska
Taliye Odowaa oo Ciidamada Xoogga dalka ka bari…
Qaybtii labaad dad laga keenay Sacuudiga oo Galabta laga…